एक क्विन्टल तौल भएको खसी – Newsagro.com :
एक क्विन्टल तौल भएको खसी
January 31, 2014 NewsAgro0Comments Newsagro
कैलाली, १८ माघ / बैतडीको पाटन गाविस वडा नं– ४ लोरखाकी लक्ष्मी जोशी (कुमार)ले पालेको एक क्विन्टलको खसी बिक्रीका लागि धनगढी ल्याइएको छ । एक सय किलो तौल रहेको खसी बैतडी जिल्लामा कसैले पनि नकिने पछि बिक्रीका लागि मङ्गलबार धनगढी ल्याइएको हो ।
धनगढी ल्याइएको तीन दिनसम्म खसी बिक्री हुन नसकेको लक्ष्मीका श्रीमान् जनकराज जोशीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खसीको उमेर साढे दुई वर्ष रहेको छ । जिल्लामा ३३ हजारसम्म दिने ग्राहक आएको तर आफूले ४० हजार मूल्य भनेपछि कुरा नमिलेको उहाँको भनाइ छ ।
बिक्रीका लागि आफन्त, नातागोता सबैसँग खबर गर्दासमेत बिक्री नभएपछि गाडीमा राखेर धनगढीमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘यता पनि बिक्री हुन समस्या होला जस्तो छ’ उहाँले भन्नुभयो, “चारदिन भइसक्यो कसैले पनि किन्ने आँट गर्दैनन् ।” जीउँदो अवस्थामै बजार भाउअनुसार कसैले किनिदिएको भए आफूलाई सजिलो हुने उहाँले बताउनुभयो ।
धनगढी पु¥याएदेखि साथमा खसी लिएर बजारमा गइरहेको भए पनि यतिठूलो खसीको मासु किन्ने मानिस जुट्न नसक्ने भन्दै कसैले पनि खसी काट्न नचाहेको जनकराजले बताउनुभयो । बैतडी जिल्लाको पाटन–४ लोरखामा पाँच वर्ष पहिले राजेन्द्र भण्डारीको घरमा पालेको खसी काटिसकेपछि १०६ किलो पुगेको बताइन्छ । त्यसपछि जिल्लामा सबैभन्दा बढी तौल भएको सम्भवतः यही खसी नै भएको थाहा भएको छ ।
← तरकारीमा विषादी हाल्दै हुनुहुन्छ ? प्रतिबन्ध लाग्ला !
उन्नत नश्लको चिया र अलैचीको नेपालमै पहिलो पटक अनुसन्धान सुरु →
यो समाचार 31714 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 31370 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 22806 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 3707 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले